Fomba fanamafisam-peo vita amin'ny vy-indostrialy News-Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd.
Fomba fanamafisana ny ravina vy
Fotoana: 2021-02-22 Hits: 27
Arc welding ny vy vy nandrisika
Zinc sosona amin'ny vy vy nandrisika mitondra olana sasany mandritra ny welding. Ny olana lehibe dia: ny fitomboan'ny fahatsapana ny welding amin'ny vaky sy ny mason-koditra, ny etona amin'ny zinc ary ny vovoka, ny fampidiran-tsiranoka amin'ny oksida, ny fihenan-tsofina ary ny fahasimban'ny firakotra zinc. Anisan'ireny, ny triatra welding, ny lavaka amin'ny rivotra ary ny fampidirana ireo slag no tena olana lehibe.
Mandritra ny fizotran'ny fantsom-bozaka dia mitsingevana ny metaly metaly miempo eo ambonin'ny pisinina voaidina na ny fakan'ny vy. Satria ny haavon'ny zinc dia ambany lavitra noho ny vy, ny vy ao anaty farihy anidina dia manjelanjelatra aloha, ary ny zina zinc dia miditra ao amin'ny faritry ny vy, ka manjary malemy ny fatorana eo anelanelan'ny granular. Ankoatr'izay, ny vatan-tsolika intermetallika Fe3Zn10 sy FeZn10 dia miforona eo anelanelan'ny zinc sy ny vy, izay mampihena ny plastika amin'ny vy vy. Noho izany, mora ny manapaka ny fatorana voa amin'ny fihenan'ny adin-tsaina sisa tavela.
1) Ireo anton-javatra misy fiatraikany amin'ny fahatsapana ny triatra
① Ny hatevin'ny firakotra zinc, ny zinc manarona vy vy dia manify ary tsy dia mora tohina loatra, fa ny zinc manarona vy metaly mafana kosa matevina ary mora tohina kokoa amin'ny triatra.
② Ny hatevin'ny workpiece lehibe kokoa, ny adin-tsaina fangejana lehibe kokoa ary ny fahatsapana ny triatra lehibe kokoa.
③ Ny elanelana lehibe kokoa dia ny fahatsapana ny hakitroky lehibe kokoa.
④ Fomba fanamafisana. Ny fahatsapana ny triatra amin'ny welding arc manual dia kely kokoa noho ny mandritra ny fantsom-panafody ampinga entona CO2.
2) Fomba fisorohana ny triatra.
① Alohan'ny fantsom-bozaka, ny endrika V, ny endrika Y na ny endrika miendrika X dia hatao amin'ny takelaka vita amin'ny savony. Ny firakotra zinc eo akaikin'ny lalan-drivotra dia esorina amin'ny oxyacetylene na fipoahana fasika, ary ny banga tsy tokony ho lehibe loatra, amin'ny ankapobeny manodidina ny 1.5mm.
② Misafidiana fitaovana welding miaraka amin'ny atiny Si ambany. Ny tariby welding miaraka amin'ny atiny Si ambany dia tokony ampiasaina mandritra ny fantsom-panafody entona, ny karazana titanium ary ny tady fametahana karazana kalsioma titanium dia tokony ampiasaina mandritra ny fametahana tanana.
(2) Loaka amin'ny rivotra
Amin'ny alàlan'ny hafanan'ny arc, ny sosona zinc eo akaikin'ny lalan-drivotra dia mamokatra oksidasiana (mamorona ZnO) sy etona, izay mampihena ny setroka sy ny setroka fotsy, noho izany dia mora ny miteraka pores mandritra ny lasitra. Ny onja avo kokoa mandritra ny welding dia ny fitrandrahana zinc matotra kokoa ary ny porosity marefo kokoa. Mandritra ny fikajiana miaraka amin'ny karazana Ti sy electrodes TiCa dia tsy mora ny miteraka pores misy elanelam-potoana ankehitriny. Na izany aza, rehefa ampiasaina amin'ny famafana ny karazana cellulose sy ny electrode karazana hidrogen ambany, dia mora hitranga ny porosity amin'ny alàlan'ny onja ankehitriny sy ny onja avo. Ho fanampin'izany, ny zoro vy vy dia tokony ho fehezina eo amin'ny 30 ° ka hatramin'ny 70 ° araka izay tratra.
(3) Fanafoanana ny zinc sy ny vovoka
Rehefa tariby vy no ampiarahina amin'ny fantsom-by Ny singa lehibe amin'ity karazana vovoka ity dia ny ZnO, izay misy fiatraikany lehibe amin'ny taovam-pisefoanan'ny mpiasa. Noho izany, mila mandray fepetra tsara ny rivotra mandritra ny welding. Eo ambanin'io famaritana fanamafisam-peo io ihany, ny setroka sy ny vovoka novokarina tamin'ny alàlan'ny fampiasana elektroda titanium oxide dia ambany, raha ny setroka sy ny vovoka vokarin'ny electrode hidrôzenina ambany kosa dia lehibe kokoa.
(4) fampidirana oksida
Rehefa ambany ny fantson-drano, ny ZnO niforona nandritra ny fizotran'ny fanafanana dia tsy mora nandosirana, izany dia miteraka fampidiran-dra ZnO. Ny teboka mitsonika ny ZnO dia 1800 ℃. Ny fampidirana ny ZnO amin'ny ambaratonga lehibe dia misy fiatraikany ratsy amin'ny plastika las. Rehefa ampiasaina ny elektroda titanium oxide, ny fizarana ny ZnO dia tsara sy mitovy, izay misy fiatraikany tsy misy dikany amin'ny plastika sy ny tanjaka. Na izany aza, rehefa ampiasaina ny karazana cellulose na electrode karazana hidrogen, avo kokoa ny atin'ny ZnO ao anaty las, ary ratsy ny fahombiazan'ny las.
Welding teknolojia ny vy nandrisika
Ny vy vita amin'ny vy dia azo ampiarahina amin'ny fantsom-bokatra arabo, MIG welding, welding arc argon, welding welding ary fomba hafa.
(1) Fanamafisana arc
1) Fiomanana alohan'ny welding
Mba hampihenana ny vovoka welding ary hisorohana ny triatra sy ny lavaka fametahana dia tokony hesorina ny sosona zinc manaka ny alàlan'ny alàlan'ny fanomanana alika alika alohan'ny fametahana. Ny fomba fanesorana dia mety ho fanamainana afo na fanapoahana fasika. Ny alàlan'ny alàlan'ny alim-bolo dia tokony fehezina ao anatin'ny 1.5-2mm araka izay tratra. Rehefa lehibe ny hatevin'ny workpiece dia azo ahena ho 2.5-3mm.
2) Fisafidianana ny tsorakazo
Ny fitsipiky ny fifidianan'ny tsora-by dia ny toetran'ny mekanika ny vy lasana tokony ho akaiky ny metaly fototra, ary ny atin'ny silika amin'ny metaly napetraka dia tokony ho ambanin'ny 0.2%.
Ny tanjaka iraisana azo tamin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny elektrônika ilmenite, electrode titanium oxide, electrode karazana cellulose, electrode karazana kalsioma titanium ary electrode karazana hydrogène ambany dia afaka manampy amin'ny fanovozana index afa-po. Na izany aza, ny fampidirana ny slag sy ny porosity dia mora mitranga amin'ny famafazana lasitra miaraka amin'ny electrode hydrogen hydrode ambany sy electrode cellulose, noho izany dia tsy ampiasaina amin'ny ankapobeny.
J421 / J422 na J423 electrode dia tokony aleony amin'ny takelaka vy vita amin'ny gazy karbonika ambany. E5001, E5003 ary karazan-tsoroka vy hafa dia azo ampiasaina amin'ny ravin-vy mirary vy miaraka amin'ny naoty matanjaka ambonin'ny 500MPa. Ny electrodes E6013, E5503 ary E5513 dia tokony hampiasaina ho an'ny vy vita amin'ny vy mitafy hery mahery mihoatra ny 600MPa.
Mandritra ny welding, ny arc fohy dia azo ampiasaina araka izay tratra, ny swing swing dia tsy avela hisorohana ny fanitarana ny faritra mihitsiran'ny zinc, izay miantoka ny fanoherana ny harafesin'ny workpiece ary mampihena ny vovoka.
Ny lasitra arofanina entona CO2 na Ar + CO2, Ar + O2 vy mifono vy mifono vy dia azo ampiasaina amin'ny fametahana. Ny fomba fiadiana entona miaro dia misy vokany miharihary amin'ny atin'ny Zn mandritra ny welding. Rehefa CO2 madio na Co2 + O2 no ampiasaina dia avo kokoa ny atin'ny Zn ao anaty las, rehefa Ar + CO2 na Ar + O2 no ampiasaina dia ambany kokoa ny atin'ny Zn ao anaty las. Miaraka amin'ny fitomboan'ny fantsom-pandehanana ankehitriny dia mihena kely ny atin'ny Zn ao anaty las.
Rehefa ampiasaina ny welding welding arc vita amin'ny lasitra vy, ny setroka dia lehibe kokoa noho ny mandritra ny welding arc, ka tokony handinika manokana ny setroka. Antony lehibe misy ny fiatraikany amin'ny habetsahan'ny soot ny gazy mandeha sy miaro ankehitriny. Ny onja avo kokoa na ny atin'ny CO2 na O2 amin'ny entona miaro dia ny, ny setroka mahery vaika kokoa dia, ny atin'ny ZnO amin'ny setroka dia mitombo ihany koa. Ny atiny farany ambony an'ny ZnO dia mety hahatratra 70%.
Eo ambanin'io famaritana vy io ihany, ny fidirana amin'ny vy vita amin'ny vy dia lehibe kokoa noho ny vy tsy vita amin'ny vy. T-joint, lap joint sy ny welding mitsangana ambany dia mora tohina kokoa amin'ny porosity welding, ny hafainganam-pandeha avo kokoa dia ny porosity mora hita; ho an'ny vy mitazona ny hafainganam-pandehan'ny vy dia mazava ho azy. Mandritra ny multi pass welding porosity fahatsapana ny pass manaraka dia ambony noho ny pass teo aloha.
Ny firafitry ny entona miaro dia tsy misy fiatraikany lehibe amin'ny fananana mekanika amin'ny tonon-taolana, noho izany dia ny CO2 madio matetika no ampiasaina amin'ny famafana. Ny masontsivana momba ny fantsom-pandrefesana I-joint, lap joint ary T-joint dia omena amin'ny tabilao 1-3.
Tabilao 1 Ireo masontsivana famaritana ho an'ny fehin-kodiarana vy amin'ny vy mitambatra vy mitambatra miendrika I
Ny hatevin'ny birao / mm banga / mm Toetran'ny welding Hafainganana / mm · s-1 Volan'ny arc / V Welding amin'izao fotoana izao / A Hafainganana / mm · s-1 fanamarihana
1.6 0 Fehin-kibo fisaka, fantsona mitsivalana, fantson-tsivalana, fantson-tànana ambony 59.2~80.482.550.850.8~55 17~20171818~19 70~9090100100~110 5.1~7.25.98.5- Welding tariby ER705-3 savaivony 0.9mm elongation maina 6.4mm
3.2 0.8~1.5 Fehin-kibo fisaka, fantsona mitsivalana, fantson-tsivalana, fantson-tànana ambony 71.971.971.971.9 20202020 1.35135E + 11 5.57.66.85.5
Tabilao 2 Famaritana ho an'ny fehin-kibo CO2 amin'ny fehin-kibo vy vita amin'ny vy
Ny hatevin'ny birao / mm Toetran'ny welding Hafainganana / mm · s-1 Volan'ny arc / V Welding amin'izao fotoana izao / A Hafainganam-pandeha mando / mm · s-1 fanamarihana
1.6 Lasina fisaka, fantsona marindrano, fantson-tànana ambony, fantsom-boanjo 50.850.850.850.8 1919~2019~2018 110100~110100~110100 5.1~6.85.5~6.84.2~5.15.5~6.8 Welding tariby ER705-3 savaivony 0.9mm elongation maina 6.4mm
3.2 Fehin-kibo fisaka, fantsona marindrano, lasitra mitsivalana ambany, fehy ambony 67.267.267.759.2 19191919 1.35135E + 11 3.8~4.23.8~4.25.13.4~3.8
Tabilao 3 Famaritana voafaritra ho an'ny fantson-tsoavolan'ny vy vy mitambatra T (fitambaran-joro)
1.6 Fehin-kibo fisaka, fantson-tsipika mitsivalana, fantson-tànana mihidy, fantsona marindrano 50.8~5555~65.65559.2 181919~2020 100~110110~120110120 -5.95.1 Welding tariby ER705-3 savaivony 0.9mm elongation maina 6.4mm
3.2 Fehin-kibo fisaka, fantsona mitsivalana, fantson-tsivalana, fantson-tànana ambony 71.971.971.971.9 20202020 1.35135E + 11 4.75.94.25.1
Taloha: Ny fiaramanidina mpandeha an-trano "C919" voalohany avy any Honeycomb sy ireo vokatra mitambatra hafa dia haseho tsy ho ela ho an'ny serivisy fiaramanidina
Next: Takelaka tantely tantera-by